दाजु-भाईले दिदि-बहिनी नै विवाह गरेर घर ल्याए, तर त्यही रातको १ बजे जे भयो थाहा पाउने जो कोही चकित ! – Online Khabar 24
दाजु-भाईले दिदि-बहिनी नै विवाह गरेर घर ल्याए, तर त्यही रातको १ बजे जे भयो थाहा पाउने जो कोही चकित !
विवाहलाई लिएर एक भ’यावह घटना घटेको छ । जसले गाउँ नै स्त’ब्ध बनेको छ । भारत, उत्तर प्रदेश आगराको ताज शहरबाट एउटा स्तब्ध पार्ने समाचार आएको कुरा भारतीय सञ्चार माध्यमहरुमा आएको छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार दुई जना दाजु भाइले दुई जना बहिनीलाई विवाह गरेका थिए ।
भएको के भने विवाह भएको राति नै ति दुई दुलहीले गर गहना लिएर फरा’र भएका हुन् । विवाहको पहिलो रात सुरु हुनुभन्दा ठीक अघि शौचालय जाने बहानामा फिल्मी स्टाइलमा गहना–रूपैयाँ लिएर फरा र भएको खुल्न आएको छ । दुलही खोज्दा सुराकस म्म पनि फेला नपारेपछि केटाहरुसहित सिंगो परिवार निराश छ ।
जानकारी अनुसार दुबै दुलहीको माइतीबाट विदा भएर आएको तीन घण्टा पछि बाह प्रहरी चौ’की क्षेत्रमा रहेको फेरेरा गाउँ पुगेर फरार भएको खुल्न आएको छ । बाह प्रहरी चौकी क्षेत्रको फेरेरा गाउँ निवासी दुई भाइको बिहीबार सोनभद्रकी दुई दिदी बहिनीसँग विवाह भएको थियो ।
अहिले दुलहा र उसको परिवार दुःखी छन् । बुबाले पनि छोरालाई विवाहको लागि एक लाख ६० हजार रूपैयाँ दिएका थिए । ताकि उनीहरूको घर बसोबास गर्न सकून् भनेर उक्त रकम उपलब्ध गराएका हुन् । तर विवाहजस्तो खुःशी हात परेको ती घण्टामा नै सबथोक बर्बा’द भयो । प्रतिकात्मक तस्बिर
Prevइन्स्पेक्टरसँग लिभ इन टुगेदरमा बसेकी महिला मृ’त फेला,
nextस्त’न सानो वा ठूलो हुँदैमा यौ’न सन्तुष्टि पनि तल–माथि हुन्छ त? जान्नुस के हो त ?